1 Ihe E Mere 28:1-21
28 Devid wee kpọkọta ndị isi+ niile nke Izrel, ndị isi+ nke ebo dị iche iche na ndị isi nke ìgwè dị iche iche na-ejere eze ozi na ndị isi+ nke otu puku otu puku ndị agha+ na ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha+ na ndị isi nke ndị na-elekọta ngwongwo+ na anụ ụlọ+ niile nke eze na ụmụ ya,+ tinyere ndị na-eje ozi n’obí eze+ na ndị dike,+ ọbụna dimkpa ọ bụla bụ́ dike, na Jeruselem. 2 Devid bụ́ eze wee bilie ọtọ kwuo, sị: “Nụrụnụ, ụmụnne m na ndị m. Ọ dị m n’obi+ iwuru igbe ọgbụgba ndụ Jehova ụlọ izu ike, ka ọ bụkwaara Chineke anyị ihe mgbakwasị ụkwụ,+ emewokwa m nkwadebe maka iwu ya.+ 3 Ezi Chineke wee sị m, ‘Ị gaghị ewuru aha+ m ụlọ; n’ihi na ị bụ onye agha, ị wụfuwokwa ọbara.’+ 4 Jehova bụ́ Chineke Izrel wee si n’ụlọ nna m+ dum họrọ m ịbụ eze+ Izrel ruo mgbe a na-akaghị aka; n’ihi na ọ bụ Juda ka ọ họọrọ ịbụ onye ndú.+ A bịakwa n’ụlọ Juda, ọ họọrọ ụlọ nna m.+ N’etiti ndị nna m mụrụ,+ o nwere mmasị n’ebe m nọ,+ ime ka m bụrụ eze Izrel dum; 5 n’ime ụmụ m niile (n’ihi na Jehova nyere m ọtụtụ ụmụ)+ ọ họọrọ Sọlọmọn+ nwa m ịnọkwasị n’ocheeze+ nke alaeze Jehova ịchị Izrel. 6 “Ọ sịkwara m, ‘Ọ bụ Sọlọmọn nwa gị ga-ewu ụlọ m+ na ogige m; n’ihi na ahọrọwo m ya ka ọ bụrụ nwa m,+ mụ onwe m ga-abụkwa nna ya.+ 7 M ga-eme ka ọbụbụeze+ ya guzosie ike ruo mgbe a na-akaghị aka ma ọ bụrụ na ọ ga-ekpebisi ike idebe ihe m nyere n’iwu+ na mkpebi ikpe+ m, dị ka ọ na-eme taa.’ 8 Ugbu a, n’ihu Izrel dum, bụ́ ọgbakọ Jehova,+ nakwa ná ntị Chineke anyị,+ lezienụ anya chọọ ihe niile Jehova bụ́ Chineke unu nyere n’iwu, ka unu wee nweta ezi ala ahụ+ ma nyefee ya ụmụ unu bụ́ ndị ga-anọchi unu dị ka ihe nketa ruo mgbe a na-akaghị aka. 9 “Ma gị onwe gị, Sọlọmọn nwa m, mara+ Chineke nke nna gị, jirikwa obi gị dum+ na mkpụrụ obi jupụtara n’aṅụrị+ jeere ya ozi;+ n’ihi na Jehova na-enyocha obi niile,+ ọ na-amatakwa ihe niile mmadụ na-eche n’echiche.+ Ọ bụrụ na ị chọọ ya, ọ ga-ekwe ka ị chọta ya;+ ma ọ bụrụ na ị hapụ ya,+ ọ ga-ajụ gị ruo mgbe ebighị ebi.+ 10 N’ihi na, lee, Jehova ahọrọwo gị ka i wuoro ya ebe nsọ. Nwee obi ike, meekwa ihe.”+ 11 Devid wee nye Sọlọmọn nwa ya ụkpụrụ+ nke ihe owuwu ụzọ mbata+ na nke ụlọ ya dị iche iche nakwa ụlọ nkwakọba ihe ya+ na ọnụ ụlọ ya ndị ga-adị n’elu*+ na ọnụ ụlọ ime ya ndị ga-agba ọchịchịrị na ụlọ a ga-adọba ihe mkpuchi mmehie;+ 12 ọbụna ụkpụrụ ihe owuwu nke ihe ọ bụla o nwetara site n’ike mmụọ nsọ+ banyere ogige+ ụlọ Jehova nakwa banyere ụlọ iri ihe+ niile ndị a ga-enwe gburugburu ya, banyere ebe nkwakọba akụ̀ ndị ga-adị n’ụlọ ezi Chineke nakwa banyere ụlọ a na-akwakọba akụ̀ ndị e doro nsọ;+ 13 o nyekwara ya ntụziaka banyere otú a ga-esi hazie ndị nchụàjà na ndị Livaị n’ìgwè n’ìgwè+ nakwa banyere ọrụ niile a ga-arụ n’ụlọ Jehova nakwa banyere arịa niile a ga-eji na-eje ozi n’ụlọ Jehova; 14 o nyekwara ntụziaka banyere otú ọlaedo ga-aha n’ịdị arọ, bụ́ ọlaedo a ga-eji mee arịa niile a ga-eji na-arụ ọrụ dị iche iche nakwa banyere arịa niile a ga-eji ọlaọcha mee dị ka ịdị arọ ha kwesịrị ịdị, bụ́ arịa+ niile a ga-eji na-arụ ọrụ dị iche iche; 15 nakwa ịdị arọ nke ihe ndọba oriọna+ ọlaedo na oriọna ọlaedo ha, dị ka ịdị arọ nke ihe ndọba oriọna dị iche iche na oriọna ha kwesịrị ịdị, nakwa banyere ihe ndọba oriọna ọlaọcha dị ka ịdị arọ nke ihe ndọba oriọna na oriọna ya kwesịrị ịdị, dị ka ihe a ga-eji ihe ndọba oriọna dị iche iche na-eme si dị; 16 nakwa otú ọlaedo a ga-eji rụọ tebụl achịcha a na-edo n’usoro+ ga-aha n’ịdị arọ. O nyekwara ntụziaka banyere tebụl dị iche iche, nakwa banyere ọlaọcha a ga-eji rụọ tebụl ọlaọcha; 17 nakwa banyere ndụdụ na ọkwá+ na nnukwu iko ndị a ga-eji ọlaedo a na-agwaghị agwa mee. O nyekwara ntụziaka banyere obere ọkwá ọlaedo+ dị ka ịdị arọ nke obere ọkwá dị iche iche kwesịrị ịdị, nakwa banyere obere ọkwá ọlaọcha dị ka ịdị arọ nke obere ọkwá dị iche iche kwesịrị ịdị; 18 nakwa banyere ebe ịchụàjà nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ+ nke a ga-eji ọlaedo a nụchara anụcha mee dị ka ịdị arọ ya kwesịrị ịdị, nakwa banyere ihe nnọchianya ụgbọ ịnyịnya,+ ya bụ, cherọb+ ọlaedo ndị nku ha ga-agbasapụ agbasapụ wee kpuchie igbe ọgbụgba ndụ Jehova. 19 “O mere ka m ghọta ihe a dum site n’ide ya ede,+ site n’aka Jehova nke dị n’ahụ́ m, ọbụna maka ọrụ niile dị n’ụkpụrụ ihe owuwu a.”+ 20 Devid wee gaa n’ihu ịgwa Sọlọmọn nwa ya, sị: “Nwee obi ike,+ dị ike, meekwa ihe. Atụla egwu,+ atụkwala ụjọ,+ n’ihi na Jehova Chineke, bụ́ Chineke m, nọnyeere gị.+ Ọ gaghị agbahapụ gị,+ ọ gaghịkwa ahapụ gị ruo mgbe a rụchara ọrụ dum metụtara ozi ụlọ Jehova. 21 Lee, i nwere ìgwè dị iche iche nke ndị nchụàjà+ na ndị Livaị+ maka ozi niile a ga-eje n’ụlọ ezi Chineke; n’ọrụ a dum, i nwere onye ọ bụla dị njikere+ bụ́ onye nwere nkà ije ozi a dum,+ tinyekwara ndị isi+ na mmadụ niile, ime ihe niile ị ga-ekwu.”